eNasha.com - धूमपान नगर्नेलाई अफिस निकाला
एउटा स्यानो कम्प्युटर कम्पनीका मालिकले तीन जना धूमपान नगर्ने आफ्ना कामदारलाई जागीरबाट निकाला गरेका छन् । धूमपान नगर्ने यी तीन जनाले आफ्ना 'बोस'लाई धूमपान नगरिदिन अनुरोध गरेका कारण उनलाई जागीर निकाला गरिएको रोयर्टस समाचार संस्थाले जनाएको छ ।
ती तीन जनाले मालिकको धूमपान गर्ने शैलीका कारण काममा व्यवधान परेको गुनासो गरेका थिए । जतिबेला पनि त्यही एउटा गुनासो सुनाइरहेका कारण 'मालिक'को कन्पारो तातेको र उनले जागीरबाट निकाला गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
१० कामदार मात्र रहेको जर्मनीको ब्युसम शहरको यो आइटी अफिसका सञ्चालक थोमस जे. रहेको जर्मन पत्रिका ह्याम्बर्गर मोर्गेन पोस्टले जनाएको छ ।
गएको जनवरी १ देखि जर्मनीले पब, रेष्टुराँजस्ता स्थानमा धूमपान नगर्ने उर्दी जारी गरेको थियो । तर जर्मनीमा साना कार्यालयहरुमा अझै पनि धूमपान गर्न सकिने प्रावधान कायम छ ।
"म किचकिचे कामदार सहन सक्तिनँ", थोमसले पत्रिकालाई बताएका छन्- "हाम्रो धेरैजसो काम त फोनमा हुन्छ । अर्काको क्याबिनमा खाइने चूरोटले आखिर कहाँनिर तिनलाई असर गर्‍यो ? अर्को कुरा के पनि छ भने म चूरोट नपिई कामै गर्न सक्तिनँ । त्यसैले मैले आइन्दा चूरोट पिउनेलाई मात्र काममा राख्ने निर्णय गरेको छु ।"
परिस्थिति यस्तो पनि ! माया सुन्दरी बलिउड गुगल मुद्दा मामिला मूर्ख्याइँ सेलेब्रिटी इन्टरनेट भव्यता विज्ञापन श्रीमानश्रीमती प्रविधि कीर्तिमान उपाय नग्नता हलिउड फट्याइँ सेक्स